नेपाल आज | मेरो बारेमा जथाभावी बोल्ने द्वारिकालाल चौधरीसँग कुरा गर्न खोज्दा फोन उठाएनन् (भिडियोसहित)
पर्शुराम बस्नेत, युवा संघ नेपालका उपाध्यक्ष हुन् । तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भएपछि दुवै पार्टीका युवा संगठनहरुबीच पनि एकता प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ । तर दुवै तिरका संगठनहरुको पुरानो संरचना भने यथावत छ । नेकपा एमालेका कार्यकर्ता मात्रै नभएर विशेषत प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट समेत भनेर चिनिने बस्नेत चर्चामा आइरहने युवा नेता हुन् । बस्नेतालाई कुनै बेला पत्रकार कुटपिटको आरोप लागेको थियो । केही मिडियामा उनी गुण्डा नाइकेका रुपमा चित्रित पनि भए । बस्नेतकै शब्दमा भन्ने हो भने यस्ता लाञ्छनाहरु कुनै पनि अदालतबाट प्रमाणित भएनन् । प्रस्तुत छ, युवा नेता बस्नेतसँग गरिएको कुराकानीको मुख्यमुख्य कुराहरुः
दुई संगठन एकता प्रक्रियामा त छन्, तर दुवै संगठनका नेता कार्यकर्ताहरुमा मनमा तुष छ भन्ने कुरा आइरहेको छ । संगठनको नाममा पनि विवाद भन्ने कुरा छ । कसरी अगाडि बढिरहेको एकता प्रक्रिया ?
नयाँ संगठनको नाम युवा संघ राख्दा आफूहरुको प्रतिनिधित्वि नभएको जस्तो देखिने भयो भन्ने उहाँहरुको कुरा छ । तर संगठनको नाम टुंिगसकेको छ । संयोजक, सहसंयोजक पनि टुगिएको छ । दुई वटा संगठनमा ५०० जति केन्द्रीय सदस्य छन् । त्यसलाई नयाँ संरचना बनाएर २५१ मा झार्नु पर्ने छ ।
दुई पार्टी एक हुँदा दुवैलाई फाइदा त भयो होला, तर तपाईंहरु जस्ता धेरै कार्यकर्ताहरुले भने स्पेस नपाउने स्थिति सिर्जना भएको छ । यसर्थ यो कोणबाट चाहिँ नोक्सान भएको जस्तो लाग्दैन ?
व्यक्तिगत फाइदा घाटा ठूलो निर्णय लिएको बेला हेरिनु हुँदैन । देशका लागि, जनताका लागि र पार्टीका लागि यो निर्णय भएको हो । यस्तो बेला हामीले व्यक्तिगत तहभन्दा माथि उठेर सोच्नु पर्छ । नेपाली जनता पनि जुटेको हेर्न चाहन्थे । स्थायी सरकार, स्थायीत्व चाहेका थिए जनताले । जसका कारण पार्टीले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
युवा संघ भनेको ठूलो संगठन थियो, सानो संगठनको व्यक्ति बीचमा टुप्लुक्क आएर नेतृत्व गर्दा तपाईंलाई नराम्रो त लाग्यो होला नी ?
यो विशेष परिस्थिति हो । यो परिवेशमा यस्तो पनि हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । पार्टीमा जनवादी केन्द्रीयता लागू हुन्छ । केन्द्रले गरेको निर्णय हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । अब यो विस्तारै नियमित आवधिक निर्वाचन, सम्मेलन आदिबाट व्यवस्थित हुँदै जानेछन् ।
मुलुकमा दुईतिहाई समर्थन प्राप्त सरकार छ । युवाका कुरा तपाईंहरु गर्नुहुन्छ । तर लाखौं युवा विदेशमा श्रम गरिरहेका छन् । युवाका शव बाकसमा नेपाल आइरहेका छन् । किन ?
अवस्था यस्तो छ । तर सुधारका काम पनि भइरहेका छन् । भएका राम्रा कामको चर्चा नहुने तर नकारात्मक विषयहरु बढी फैलिने भएका कारण अलिकति यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको हो । हालै भक्तपुरमा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम शुभारम्भ भयो । युवा लक्षित कार्यक्रम पनि आइरहेका छन् ।
तपाईंले सकारात्मक सोच्नु पर्छ त भन्नुभयो, तर असार महिनामा सक्ने गरी २ अर्ब ३७ करोड खर्च गर्ने भनेर खर्च व्यापक गरिएको छ । त्यो रकमको दुरुपयोग भएको खबर आइरहेका छन् । कसरी यस्ता कुरालाई सकारात्मक मान्ने ?
छोटो समयमैमै ठूला उद्योग स्थापना गरेर धेरैलाई रोजगारी दिइहालौं भन्न सकिने स्थिति छैन । यो विस्तारै हुन्छ । तर रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने पूर्वाधारका काम गर्न सकिन्छ । रोडमा झार उखल्ने काम पनि आखिर कामै हो । आवश्यक हो भने गर्नुपर्छ । बनिबनाउ रोजगारी दिइहाल्ने अवस्था छैन । न्युनतम १२० दिन रोजगारी सरकारले दिन्छ भनेकै छ ।
तपाईं सकारात्मकतामा जोड दिइरहनु भएको छ । तपाईं त झन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग पनि निकट भनेर परिचित हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीको छवि भने हावादारी सपना बाँड्नेमा स्थापित भइरहेको छ नी ?
हो, हामीले सकारात्मक तरीकाले सोच्ने बानी बसाल्नु पर्छ । प्रधानन्त्रीले देखेको सपना आजसम्म कसैले देख्न सकेका थिएनन् । रेल चलाउने सपना देख्नु भएको छ । के गल्ती गर्नु भयो त ? घरघरमा पाइपबाट ग्यास लैजाने सपना देख्नु भयो । विराटनगरमा त हामीले शुरु नै गरिसकेका छौं । प्रधानमन्त्रीले उदघाटन नै गर्नुभयो ।
विराटनगरको ग्यास प्लान्ट त पुरानो थियो, त्यहा लगेर प्रधानमन्त्रीको दुरुपयोग गरियो भन्ने पो छ त ?
हामीले ८५ घरमा पुर्याएका थियौं । ५०० घरमा पुर्याउने योजना हो । सकारात्मक कामको सकारात्मक टिप्पणी गर्ने बानी बसाल्नु पर्छ । फास्ट ट्रयाक, विभिन्न विमानस्थलहरु दू्रत गतिमा बनिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि राम्रो हुँदै गएको छ । विकासका कामहरुले गति लिएका छन् ।
सरकारको आलोचना त नेकपाभित्रैका नेताहरुले पनि गरिरहेका छन् नी ?
अब राम्रो काम गर्ने प्रधानमन्त्रीको आलोचना नै नगर्ने भन्ने हुँदैन । किनभने यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो । यो व्यवस्थामा सरकारको आलोचना गर्न पाइन्छ । सरकारले काम गरेन भन्ने हिसाबले भने बुझ्नु हुँदैन । सरकारको काम सुस्त भयो कि भन्ने लाग्यो भने सरकारलाई घचघच्याउनु पर्छ । त्यसलाई नराम्रो मान्नु हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले पनि सकारात्मक रुपले नै बुझ्नु भएको होला ।
लोकतन्त्रमा आलोचना गर्न पाइन्छ भन्नुभयो, तर पशुपति शर्माको गीतमा किन प्रतिबन्ध लगाउनुभयो त ?
पशुपति शर्माको गीत हामीले ब्यान गरेको होइन । व्यक्तिविशेषले फेसबुकमा लेखेको कुराहरु संगठनको आधिकारिक धारणा हुन सक्दैन । गीतमा भएका कमजोरी गायक स्वंयले महशुस गरेर भिडियो हटाउनु भयो । व्यंग्यमा सरकारको आलोचना गर्न पाइन्छ । तर कसेैको मान मर्दन हुने, अनास्था फैल्याउने ढंगले हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
तपाईंले पत्रकार कुट्नु भयो, तर कारबाही भोग्नु परेन भनेर इटहरीका मेयर द्वारिकालाल चौधरीले भन्नु भयो । कुरा साँचो नै हो ?
इटहरीका मेयरले मैले पत्रकार कुटेको सुन्नु भयो । केही अखबारले मलाई मुछेको पढ्नु भयो र त्यसकै आधारमा धारणा बनाएर निष्कर्ष पनि निकाल्नु भयो । उहाँले उडन्ते कुरा सुन्नु भयो तर पत्रकारको प्रकरणमा तीनै तहका अदालतले मलाई सफाइ दिएको चाहिँ थाहा पाउनु भएको रहेनछ । अल्पज्ञान लिएर त्यसलाई नै सत्य मानेर हिँड्नेहरुका सवालमा म के भन्न सक्छु र ? सहि मान्छेले द्वारिकालालले जसरी बोल्न हुँदैन भन्ने लाग्छ । मानसिक सन्तुलन ठीक नभएका मानिसले मात्रै चौधरीले जसरी बोल्न सक्छन् । मेरो साइनो सम्बन्ध केही नभएको कुरामा मेरो नाम जोड्नु गलत हो ।
तपाईं र उहाँबीच कुनै कुरा भएन ?
मैले फोन गरेँ । उहाँले फोन उठाउनु भएन । कुनै रेस्पोन्स पनि गर्नु भएन । एसएमस पनि गरेँ, वास्ता गर्नुभएन ।
अहिले त द्वारिकालाल चौधरीलाई त हिरो मान्नेहरु पनि बढेका छन नी ?
मैले अघि नै पनि भने त । नकारात्मक विषय, प्रवृत्ति हाम्रा समाजमा हावी भइरहेको छ । कानुन मिच्ने मानिस हिरो हुने, विधि नमान्ने हिरो हुने त प्रवृत्ति छ । रुल अफ ल भन्दा पनि हुल अफ लले निर्देशित गरिरहेको छ । हाम्रो मुलुकलाई एक हुलले जे निर्देशन गर्छ, त्यही अुनसार निर्णय गराउन खोज्ने चलन बस्न लागेको छ । माइतीघर मण्डलामा उफ्रेर प्रधानन्यायाधीश नै हटाउने चर्को आवाज उठेको होइन र ?